Emọs 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jehova gwara Emọs ihe ọ ga-ebu n’amụma (1, 2)
Obodo ndị a ga-ata ahụhụ maka isi ha nupụụrụ Jehova ugboro ugboro (3-15)
Siria (3-5), Filistia (6-8), Taya (9, 10), Ịdọm (11, 12), Amọn (13-15)
1 Ihe a gwara Emọs* n’ọhụụ gbasara Izrel. Emọs so ná ndị Tekoa+ na-azụ atụrụ. A gwara ya ihe a n’oge Eze Ọzaya+ na-achị Juda nakwa n’oge Jeroboam+ nwa Joash+ bụ eze Izrel. Ọ hụrụ ọhụụ a afọ abụọ tupu e nwee ala ọma jijiji.+ 2 Ọ sịrị: “Jehova ga-esi na Zayọn bigbọọ. Ọ ga-esikwa na Jeruselem mee ka a nụ olu ya. Ala anụmanụ na-ata ahịhịa, nke ndị ọzụzụ atụrụ na-edu atụrụ ha aga, ga-eru uju. Ahịhịa ndị dị n’elu elu ugwu Kamel ga-akpọnwụkwa.”+ 3 “Jehova kwuru, sị: ‘“N’ihi isi ndị Damaskọs nupụrụ ugboro ugboro,* m gaghị ahapụ ime ha ihe m kpebiri ime ha,N’ihi na ha ji ígwè e ji eticha ọka tipịa Gilied.+ 4 M ga-eme ka ọkụ gbaa ụlọ Hazel,+Ọ ga-erepịakwa ụlọ elu niile nke Ben-hedad.+ 5 M ga-agbaji ihe e ji atụchi Damaskọs.+ M ga-ebibi ndị bi na Bikat-evin,Bibiekwa onye nọ na Bet-iden na-achị.* A ga-adọrọkwa ndị Siria n’agha laa Kia.”+ Ọ bụ Jehova na-ekwu ihe a.’ 6 Jehova kwukwara, sị: ‘“N’ihi isi ndị Gaza nupụrụ+ ugboro ugboro,* m gaghị ahapụ ime ha ihe m kpebiri ime ha,N’ihi na ha kpọọrọ ndị niile a dọọrọ n’agha+ kpọnye Ịdọm. 7 M ga-eme ka ọkụ gbaa mgbidi Gaza,+Ọ ga-erepịakwa ụlọ elu ya niile. 8 M ga-ebibi ndị bi n’Ashdọd,+Bibiekwa onye nọ n’Ashkelọn+ na-achị.* M ga-ata Ekrọn+ ahụhụ. Ndị Filistia fọrọnụ ga-alakwa n’iyi.”+ Ọ bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.’ 9 Jehova kwukwara, sị: ‘N’ihi isi ndị Taya nupụrụ+ ugboro ugboro,* m gaghị ahapụ ime ha ihe m kpebiri ime ha,N’ihi na ha kpọọrọ ndị niile a dọọrọ n’agha kpọnye Ịdọm,Nakwa n’ihi na ha echetaghị ọgbụgba ndụ nwanne na nwanne.+ 10 N’ihi ya, m ga-eme ka ọkụ gbaa mgbidi Taya. Ọ ga-erepịakwa ụlọ elu ya niile.’+ 11 Jehova kwuru, sị: ‘N’ihi isi ndị Ịdọm nupụrụ+ ugboro ugboro,* m gaghị ahapụ ime ha ihe m kpebiri ime ha,N’ihi na ha ji mma agha chụọ ụmụnne ha ọsọ,+Nakwa n’ihi na ha emereghị ha ebere. Ha ji iwe na-adọri ha n’akwụsịghị akwụsị,Ha bukwaara ha iwe n’obi mgbe niile.+ 12 N’ihi ya, m ga-eme ka ọkụ gbaa Timan.+ Ọ ga-erepịakwa ụlọ elu niile nke Bọzra.’+ 13 Jehova kwuru, sị: ‘“N’ihi isi ndị Amọn nupụrụ+ ugboro ugboro,* m gaghị ahapụ ime ha ihe m kpebiri ime ha,N’ihi na ha bọwara ụmụ nwaanyị Gilied dị ime afọ iji nwetakwuo ala.+ 14 N’ihi ya, m ga-amụnye mgbidi Raba+ ọkụ. Ọ ga-erepịakwa ụlọ elu ya niile. A ga-eti mkpu agha n’ụbọchị agha. Oké ifufe ga-efekwa n’ụbọchị oké ifufe mmiri. 15 A ga-adọrọ eze ha n’agha, dọrọkwa ndị o mere ndị isi.”*+ Ọ bụ ihe Jehova kwuru.’
^ Emọs pụtara “Onye Bụ́ Ibu” ma ọ bụ “Iburu Ibu.”
^ Na Hibru, “isi Damaskọs nupụrụ ugboro atọ na ugboro anọ.”
^ Na Hibru, “onye ji mkpanaka eze na Bet-iden.”
^ Na Hibru, “isi Gaza nupụrụ ugboro atọ na ugboro anọ.”
^ Na Hibru, “onye ji mkpanaka eze n’Ashkelọn.”
^ Na Hibru, “isi Taya nupụrụ ugboro atọ na ugboro anọ.”
^ Na Hibru, “isi Ịdọm nupụrụ ugboro atọ na ugboro anọ.”
^ Na Hibru, “isi Amọn nupụrụ ugboro atọ na ugboro anọ.”
^ O nwere ike ịbụ, “ụmụ eze.”